Etu ị ga-esi weghachite mkpuchi na peeji nke akwụkwọ ochie - Ikkaro
Inicio >> Akwụkwọ >> Iweghachi akwụkwọ ochie
Achọtara m ya dị ka nke a. Na mkpuchi mkpuchi, spain adọwara na n'ime peeji nke rụrụ.
Adịghị m ụlọ oriri na ọuraụuraụ na enweghị m akara ndị m chọrọ, yabụ ọ bụrụ na e nwere onye ọkachamara n’ime ụlọ ahụ, gbaghara m ma kwuo maka ihe ọ gaara eme.
Mweghachi nke akwụkwọ a na-ekwu
Ihe mbụ m mere bụ ịpịkọta ihe ndị dị n’ime. M nyere iwu ụfọdụ mpempe akwụkwọ na-enwere m ma mado ya dị ka a hụrụ na onyonyo ahụ. Jide ya na nwamba ụfọdụ ka ọ ghara imegharị. Ekwesighi ijide ya site na azu, ma oburu na obughi site na ijide nkpuru ahihia ka ogidi gha eme. Enyere m onwe m aka na ụfọdụ shelf ndị kpuru ìsì iji kpuchie elu ala na ọ bụ nke kachasị mma. ozugbo ọma mmasị, ị dị nnọọ nwere itinye nsogbu.
La nhọrọ nke gluu, gluu ma ọ bụ nragide ọ bụ isiokwu dị mkpa nke m na-emebeghị nhọrọ kacha mma. Ana m eji mama mama kapenta arụ ọrụ n'ihi na ọ na-agbanwe agbanwe nakwa n'ihi na ọ bụ ihe m nwere n'ụlọ. Mana o nwere ike igbanwe pH nke akwukwo ma mee ka o mebie n’ikpeazụ. Ná ngwụsị nke isiokwu m na-ahapụ njikọ ole na ole ebe ha na-ekwu banyere ahịrị na na m ga-eji nlezianya gụọ.
Mweghachi ahụ bụ ihe bara uru naanị, akwụkwọ ahụ abụghị nnukwu ihe ochie na nsogbu dị n'etiti ịrụzi ya ma ọ bụ ịtụfu ya.
Na-esote m ewerela akwụkwọ envelopu na-acha nchara nchara, ọ dị ka akwụkwọ aja aja. ụcha ahụ esiteghị na ụda ma ọ dịkwa ka ọ siri ike.
Ndo maka ogo onyonyo Nke a bụ echiche, ikpuchi ngalaba ahụ. Aga m ekpuchi akwụkwọ ahụ glued na akwụkwọ ahụ. Ihe mkpuchi ahụ ga-agabiga mkpuchi ọhụrụ a iji hụ ma ọ bụrụ na ihe oyiyi ahụ enwere m ike ịkọwa ya nke ọma.
Achọghị m ịpịkọta eriri akwa ahụ ozugbo na mpempe akwụkwọ glued. Akwụwo m na mgbochi nke epupụta, mana rịba ama na anaghị m arapara na njedebe mana m na-ahapụ akụkụ nke a ga-agbakwunye na mkpuchi ahụ, jiri nke a ka m na-enye ya ka ọ na-agagharị karịa ma ọ bụrụ na ihe niile ejiri, mgbe ahụ mpempe akwụkwọ mbụ ga-abụ ọ fọrọ nke nta na-abaghị uru
Ugbu a, m na-ewepụ ogologo ogologo ma jidesie mkpuchi ahụ ike.
Ngosiputa otu o gha abu.
Ejirila m gluu osisi kapịnta, ya mere a na-etinye ya n'akụkụ abụọ, hapụ ya ka ọ kọọ ihe dịka nkeji 10 wee jikọọ akụkụ abụọ ahụ. jiri nlezianya ma wepụ akụkụ ahụ dị oke.
Ọfọn, nke ahụ bụ otú o si kwụsị. Ma ọ dịkarịa ala mgbe ịmechara ya, ọ na-aga n'ụzọ zuru oke, ọ ga-emepe, mechie ma ọ nweghị mpempe akwụkwọ a tọhapụrụ. Enwere m olileanya na ọ ga-adịru afọ ole na ole ;-)
Kekọta a akwụkwọ nzọụkwụ site nzọụkwụ
N'isiokwu a anyị ekwuolarị otu kee akwukwo, oru ma obu ihe yiri ya na akwa. Na-akpali mmasị ọ ga-ejere gị ozi maka ọtụtụ ihe.
N'ọ́bá akwụkwọ e nwere akwụkwọ banyere ọdịnala japanese njikọ. M dee ya n’okpuru ịgụ ya n’oge na-adịghị anya ma gwa gị otu esi. Na mgbakwunye na ịhụ akụkụ na aha akwụkwọ, nke na-aga ogologo oge.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu niile nke digitization na akwụkwọ okike, ị nwere ike ịmasị https://www.ikkaro.com/como-digitalizar-libro/
Ọdụ maka ijikọ
Ahapụrụ m saịtị ụfọdụ m chọrọ inyocha iji mụtakwuo banyere isiokwu ahụ. M na-ekwe nkwa otu edemede na nke a bụ n'ezie isiokwu m chọrọ ịbanye na ya.
A na-anabata ntụnye, echiche ma ọ bụ okwu ọ bụla
Categories Akwụkwọ, Ndozi Igodo bọtịnụ
Bluewa na-acha anụnụ anụnụ. Usoro nke oké osimiri, ọdịnihu nke ụwa
2 kwuru na "Iweghachi akwụkwọ ochie"
November 10, 2019 na 6:44 pm
Ndewo, a ga m arụzigharị akwụkwọ nwere mpempe akwụkwọ ya nke kporo nkụ, kedu ka m ga esi edozi ya?
August 8, 2020 na 12:23 am
Ezigbo ntuziaka, m ga-e copyomi ya.
Ọnwa iri 20, 2020 na 12:59 pm
Ezi ụtụtụ, nke mbụ ị mere ka m mara, aha m bụ Francisco Fernández, abụ m onye na-edekọ akụkọ, parochial, na enwere ụfọdụ akwụkwọ na ọkpụkpụ na mkpuchi na-emebi, kedu ka m ga-esi weghachi ha, a gwala m na enwere ụdị nke nrapado azụ na ahịa, nwere ike, ekele
1 Mweghachi nke akwụkwọ a na-ekwu
2 Kekọta a akwụkwọ nzọụkwụ site nzọụkwụ
3 Ọdụ maka ijikọ